ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း5တစ်နေ့စွဲမှ Late ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဆင်ခြေ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 25 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ရက်စွဲတစ်ခုအဘို့အနှောင်းပိုင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းသင်တို့အပေါ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သူနှင့်အတူမျက်နှာ-to-မျက်နှာကြွလာ. က hard ဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ရိုးရိုးသားသားအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမူဝါဒ. Plus အားသင်၏ရက်စွဲအမှန်တကယ်နားလည်မှုကိုပါလျှင်, သူ / သူမလုံးဝကိုသင်သံသယ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုငါပေးမည်. အောက်တွင်, ရက်စွဲတစ်ခုနှောင်းပိုင်းမှဖြစ်ခြင်းငါးယုံကြည်လောက်ဆင်ခြေများမှာ.
သင့်အနေဖြင့်အစည်းအဝေးရာအရပျအကြိမ်ပေါင်းများစွာ googled င်, လမ်းကြောင်းမှတ်မိ, သင်ဆဲနှောင်းပိုင်းများမှာအစောပိုင်းသေးမိနစ်အနည်းငယ်ကျန်ရစ်. ဒါကြောင့်အသွားအလာလေးလံခဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်တိုင်းအနီအလင်းထိပဲဖြစ်ဖြစ်, အချိန်ကိုက်အပေါ်မှာလွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အလွယ်တကူခွင့်လွှတ်ကြောင်းရိုးရိုးသားသားအမှားဖြစ်ပါသည်.
Suri ကို အသုံးပြု. ရှောင်ရှားရန်, ငါမကြာခဏဆိုသလို Google ကငါ့အနောက်ဆုံးဦးတည်ရာ map ငါထားခဲ့ရှေ့တော်၌ထိုလမ်းညွန်၏ရုပ်ပုံယူ. ဒီသငျ့လျြောသောနေ့စွဲပြင်ဆင်မှုအချိန်များအတွက်ခွင့်ပြုနေစဉ်, ငါစနစ်တကျငါလှည့်သင့်ပါလာသောအခါသတိပေးခဲ့သည်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာအတိအကျကိုငါ့နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးအလှည့်နှောင်းပိုင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်သော get ဘယ်တော့မှ. တနည်းကား, ဤအကြောင်းကိုရှေ့ပြေးဖြစ်ခြင်းများသောအားဖြင့်အကောင်းတစ်ရယ်မောစေသည်.
မြို့တမြို့တွင်နေထိုင်သောမကြာခဏဆိုသလိုမျှရပ်နားရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်. ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းတည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်ဖို့စံပြဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, မကြာခဏဆိုသလို, ဆုံးပျော်စရာနေ့စွဲအစက်အပြောက်ကွယ်ပျောက်တစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးမဟုတ်. ဒီအခြေအနေမှာတော့, သင်သည်ကိုယ်ကိုအချိန်မီထုံးစံ၌ရောက်လာရန်လုံလောက်သောအချိန်ပေးခြောအောင်စဉ်ကအနီးဆုံးကားရပ်နားဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုရှာဖွေတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်ခြင်း (မျှော်လင့်သင့်ရက်စွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်), သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သင့်ကလေးဖြစ်ပါသည်. သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြတ်ပြီးသင့်ရက်စွဲမီကမတ်မတ်ပြောင်းလဲဖို့အိမ်မှာလာမယ်နှင့်ထိ မိ. လဲစရာချိန်တွင်ရာသီဥတုအောက်မှာဖြစ်ဟန်အဘယ်သူသည်, သငျသညျသဘာဝသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်သွားကြသည်. ဒီနှစျသိမျ့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုရှည်ယူစေခြင်းငှါနေစဉ်, သင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှစ်ဦးစလုံးငြိမ်သက်စွာမှာပိုပြီးခံစားရလိမ့်မည်, သငျသညျတညဉျ့အကြာတွင်ပုံမှန်အတိုင်းထက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်ကတည်းက.
နောက်ဆုံးမိနစ်အစည်းအဝေးများ မှစ. တစ်လက်တန်းစီမံကိန်းကိုရန်သင်၏အလုပ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရန်, ကအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ကြုံ. ဒီယုံကြည်လောက်ဆင်ခြေဆင်လက်အကျင့်ကိုကျင့်နေစဉ်, သင်၏ရက်စွဲသင်တို့အဘို့အကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်ကအလေ့အထသို့လှည့်မယ့်ကြောင်းသေချာပါစေ, အလုပ်သငျ့ဆကျဆံရေးထက်ဦးစားပေးပိုသည်.
မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့ဆင်ခြေဆင်လက်, သငျသညျအနှောင်းပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင့်ရက်စွဲအကြောင်းကြားရန်အရေးကြီးပါသည်က. မသာဒီကောင်းတဲ့အမူအယာသည်, ဒါပေမယ့်သင်ကဂရုစိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်.
အတုအွန်လိုင်း Daters ကြည့်ရန်ရန်လက်ငင်း Checkmate လမ်းညွှန်